Ime Mmụọ Mkpa Dị Mkpa - Ndị na-ekesa ihe n'usoro maka mmanụ dị mkpa | AromaEasy
Mmanụ ndị dị mkpa dị n’osisi na-ekere òkè mgbe niile n’ememme ime mmụọ, na-enyere ndị mmadụ aka izere ihe ndị na-adịchaghị mkpa. Ihe ndị dị ọcha dị na mmanụ dị mkpa na-akpali sistemụ olf na-eme ka ụbụrụ sistem na ụbụrụ nwee njikọ na ncheta, mmetụta uche na mmetụ.
Mmanụ dị mkpa nwere ike inye aka mee ka elekwasị anya na mmụọ
Mgbe ejiri ya mee ihe maka mmụọ, mmanụ dị mkpa na - eme ka echiche nke ịbụ ndị elebara anya, ntọala, na etiti. Choputa ihe mmanu kacha mma kacha mma 5 nke na-eme ka omume uche dị mma site na mmetụta dị egwu, mkpebi, amara na ntụkwasị obi onwe onye!
Banyere mmanụ Mkpa mmanụ
Ah, mmanụ dị mkpa dị mkpa sitere na osisi ọgwụgwọ! Anyị na-enwe ọ synụ na mmekọrịta mmekọrịta nke osisi osisi ndị a gbakọtara ọnụ. Ọ bụghị nanị na ha na-eme ka ahụ jụrụ, mmụọ, na mmụọ, ha na-enwukwa oke isi. Mmanụ ndị dị mkpa na ngwakọta maka omume ime mmụọ gụnyere:
Frankincense mmanụ dị mkpa bụ ntọala nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ nke eji eme ihe ime mmụọ.
N'ịbụ nke sitere na resin chịngọm nke obere osisi akọkọtara na Oman na Yemen, etinyegoro mmanụ dị mkpa frankincense kemgbe ogologo oge maka ọgwụgwọ na mmemme dị nsọ.
Mmanụ a dị mkpa na-enyere ndị mmadụ aka iwere njem ime mmụọ ha na ahụmịhe ntụgharị uche n'ọkwa dị elu.
Dị ka onye so n'ezinụlọ mint, a na-ewu ewu Lavender maka ihe na-esi ísì ụtọ na ọtụtụ ojiji. Ojiji ndị a gụnyere ọgwụ, ọrụ ime mmụọ na aromatherapy.
Flosì ifuru nke lavender dị nro, na-enye nguzozi zuru oke nke izu ike ma na-ewuli elu. Lavender na-eme nke ọma n'ịnagide nchekasị ma mee ka uche dị jụụ. N'eme mmụọ nsọ, na-enye mmanụ dị mkpa na-agbakwunye okpukpo uto n’ememe ime mmuo.
A na-ewere ya dị ka ihe nnọchianya nke ịhụnanya, a na-ama Roses ebe niile maka amara ha na isi ọma. Rose mmanụ dị oké mkpa na-akpali obi ụtọ na afọ ojuju, na-eme dị ka otu n'ime mmanụ kacha mkpa kachasị mkpa. Mmanụ dị oké mkpa na-enyekwara aka ịnagide iru újú, karịsịa maka iru újú nke onye a hụrụ n'anya.
Myrrh bụ ezigbo ahịhịa na-esi ísì ụtọ nke obere osisi siri ike nke sitere n’Are Arabia Peninsula na ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Africa. N’ịbụ onye akpọrọ uru n’akụkọ ihe mere eme niile dịka ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ihe nsure ọkụ na ọgwụ, a na-eji Myrrh mee mmemme na ụka Katọlik, Ọtọdọks na Episcopalian. Ejiri ọtụtụ ebe na Ayurvedic, Unani na ọgwụgwọ ndị China, Myrrh nwekwara ọgwụ ndị na-efe efe na nje virus. Ọ na - enyere aka ịkwalite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
Mmanụ a dị mkpa na-egosipụta izu ike na izu ike pụrụ iche.
Ylang Ylang mmanụ dị mkpa emewo ka izuike na izuike. Mmanụ a dị mkpa na-enyere aka ịhapụ echiche ndị na-adịghị mma, dị ka nchekasị, mwute, iwe, nkụda mmụọ na ahụ erughị ala. Ọzọkwa, Ylang Ylang mmanụ dị mkpa nwere ike ime ka ọnọdụ ahụ dị elu, bụrụ otu n'ime mmanụ dị mkpa maka ịhụnanya.
Etu esi eji mmanụ dị mkpa maka mmụba mmụọ
Iji mee ka uche gị dịrị, gbanye mmanụ dị mkpa ma tinyezie ya na nkwojiaka, ụkwụ, na azụ ntị. Ma ọ bụ ị nwere ike ịgbasa mmanụ site na ihe dị mkpa mmanụ mgbasa na ebe dị jụụ.
Usoro ntinye maka mmanu dị mkpa n'oge ntụgharị uche dabere na ebumnuche na ebumnuche nke ndị sonyere. Usoro ntinye, yana nhọrọ nke mmanụ dị mkpa, nwere ike ịdị iche maka omume ime mmụọ dị iche iche, dabere na mmetụta ma ọ bụ ebumnuche onwe onye kwa ụbọchị.
Jiri mmanu di nkpa nke ime mmu o
Ezigbo usoro iji zuru oke nke mmụọ dị oke mkpa mmanụ bụ inhalation site na onye mgbasa ozi. Tinye mmanu di nkpa n’ime isi, ma rie uru anụ ahụ yana nke uche site na aromatherapy. Nwere ike ịme nke ahụ ma ị nọ n'ọfịs ma ọ bụ n'ụlọ.
Tee ime mmụọ dị oké mkpa mmanụ topically
Jide n'aka na ị itughari mkpa mmanụ mbụ tupu itinye ha topically. Otu ụzọ dị mfe bụ iji mmanụ ndị na-ebu ha gwakọta ha, wee kpochapụ ngwakọta na isi ihe dị ka nkwojiaka ma ọ bụ ikpere aka ime.
Ọ bụrụ na enwere akụkụ ahụ ọ bụla, tinye obere mmanụ dị mkpa na mpaghara a ma ghaa ya na anụ ahụ. Omume a ga - enyere aka wezuga uche site na ahụ erughị ala nke anụ ahụ ma bulie echiche ime mmụọ na ntụgharị uche.
Mee ka mmanụ dị mkpa gbanyeere gị n'aka, gbanye ya n'etiti aka gị, ma jiri nwayọọ nwayọọ na-eku ume ma kupụ.
AromaEasy kwenyere na mmanụ ndị dị mkpa na -arụ ọrụ kacha mma mgbe a na -eku ume, ma ọ bụ jiri mmanụ ebu ya gwakọta ya. Anyị na -ekwukarị maka ụkpụrụ dị na aromatherapy - Naa bụ More. Yabụ, biko jide n'aka na ị ga -eji ego kwesịrị ekwesị mgbe ị na -eji mmanụ ndị a dị oke mkpa. Ugbu a, ewepụtala m gị mmanụ ise kacha mkpa maka mmụọ. Oge ọzọ mgbe mmanụ dị mkpa kpọrọ gị oku, nweere onwe gị iji ya mgbe gị na dọkịta gị kwurịtachara.